Elula kunye nejusi ebhaka inyama yengulube, inyathelo ngenyathelo zokupheka | Ukupheka kweKhitshi
Inyama yehagu ebisiweyo
Namhlanje siza kulungiselela ithenda yehagu ebhakaweyo. Ukulungiswa kwayo kuya kuba lula kakhulu, kodwa iindwendwe zakho ngokuqinisekileyo ziya kukunika intambo yeblueu.
Njengento entsha, siza kusebenzisa ibhegi yokosa, ekuvumela ukuba ulibale malunga nokupheka, awuzukulawula ukuba ulwelo lome, awuzukutshaya okanye unuke ekhitshini lakho, kwaye okona kubaluleke kakhulu, awuyi kungcola nayiphi na ipani yokutshisa.
Ixesha lokulungiselela: imizuzu engama-50
1 Iresiphi yokupheka inyama yengulube ebisiweyo kunye nesosi
2 Iingcebiso zokwenza inyama yethumba yengulube ebilayo
3 Ipheki yehagu ebisiweyo kunye nemifuno
3.1 Izithako zabantu aba-4
4 Iphekiweyo yengulube ene-mustard kunye nobusi
4.1 Izithako abantu aba-4
5 Inyama yengulube ebhakwe eyosiweyo
5.1 Izithako abantu aba-4
Iresiphi yokupheka inyama yengulube ebisiweyo kunye nesosi
1 kg inyama yengulube
1 tbsp. lwemostade
2 tbsp. Isosi ye-BBQ enobusi
1 tbsp. ingqolowa ekhawulezileyo
Ityuwa, ipepile, ipepile
1 ibhegi yokubhaka
Ukuhombisa / ukuHamba:
Iiapile ezi-4 zegolide
Sitshisa i-oveni ukuya kwi-200 º. Ityuwa yenyama ityuwa entle.
Phambi kokubeka ukutya ngaphakathi kwingxowa yosiweyo, sijika umphetho ongaphandle ubengaphandle malunga neesentimitha ezintlanu, ke siyakugcina uvulekile kwaye kuya kuba lula kuthi ukwazisa ngezithako.
Xa ibhegi ivulekile kakuhle, sibeka inyama emazantsi kwaye sidibanise isinongo esomileyo, isardard, isosi yesosi kunye nobusi, itswele kunye negalikhi esikwe kwisiqingatha. Okokugqibela sidibanisa amagqabi e-mint kwaye sivale ngophawu lwayo. Sivuselela umxholo ukuhambisa isinongo kakuhle ngaphakathi.
Silungiselela ibhegi kwisitya sokubhaka, kwaye sisika kwikona ephezulu ukuvumela umphunga uphume.
Sibeka umthombo kumbindi wehovini eshushu ngaphambili, ungaze ube ngaphezulu kwe-200º. Sibeka ukuze ingadibani nayo nayiphi na into eshushu.
Ixesha lokupheka lixhomekeke kukhetho lomntu ngamnye, kuba ikhilo kufuneka silawule ukupheka kwimizuzu engama-40. Sazisa ngemela kwaye xa kuphuma ijusi ebomvu isavuthwa, ukuba imdaka izakulunga kwaye ukuba yomile, isidlulile.
Xa sijonga ukuba kukuthanda kwethu, siyayisusa eontini.
Epanini sigalela ulwelo lokupheka, sibeke inyama ebhodini kwaye siyinqunqe ibe zizilayi ezibhityileyo.
Sisusa itswele kunye negalikhi kwincindi yokupheka siyise emlilweni ukuze shushu isosi, sifafaze icephe lekhonstarch kuyo kwaye masiyibilise ide iyeke.
Silungiselela izilayi kwiphleyiti yokukhonza kwaye siyigalele ngesosi. Ukuhlobisa ngamanye amaqabunga eminti.
Ukuhamba kunye, siyaxobula kwaye sinqumle ii-apile zibe zizilayi kwaye sizigqithise kwigridi kumacala omabini.
Kwaye ngeglasi yeCabernet Sauvignon, bon appetite!
Iingcebiso zokwenza inyama yethumba yengulube ebilayo
Ewe kunjalo, inyama enencasa eshushu yenye yeencindi. Ngaphandle koko, siya kwenza uhlobo lwebhola lebhola emilonyeni yethu. Into engathandekiyo kwaye engaphantsi, ukuba uneendwendwe. Ke, ukuze ungasileli ngeli xesha, awunako ukungahoyi ezi ngcebiso ukuze ithenda yehagu ebhakaweyo inamanzi amaninzi.
Phambi kokubeka isiqwenga senyama, i-oveni kufuneka ifudunyezwe. Into ebalulekileyo kwiindlela ezininzi zokupheka, kodwa ngakumbi kule.
Khumbula ukongeza iwayini okanye imifuno kwinyama oza kuyikhapha. Ayininzi kakhulu, ukongeza nje ukubamba okumnandi kwisiqwengana sethu. Ngale ndlela, baya kongeza incasa encinci kwaye basuse olona hlobo luchukumisayo.
Incindi ewela inyama, zidityaniswe nezongezo ozikhethileyo. Zombini iwayini kunye nemifuno esele siyikhankanyile inokusetyenziswa kwakhona. Enye into, ungasebenzisa icephe kwaye uwathele ngaphezulu kwenyama ngelixa kushushu. Ukuba ushiyeke ngokwaneleyo, yifake kwisikhephe esishiya itafile ukuze umntu ngamnye anikwe incasa.
Imathiriyeli eluhlaza esiyisebenzisayo ikwabalulekile ukuba sithethe malunga neziphumo ezinencindi.
Nje ukuba uphume ehovini, vumela inyama iphumle malunga nemizuzu eli-15 ngaphambi kokusika okanye ukukhonza.
Abantu abaninzi bakhetha ukuyitywina inyama ngaphambi kokuba bayise eontini. Ngumbandela nje wokuwenziwe mdaka epanini. Ngale ndlela, iijusi zenyama ziya kuba apho zifuna ukuba khona, ngaphakathi.
Ipheki yehagu ebisiweyo kunye nemifuno
El Ipheki yehagu ebisiweyo kunye nemifuno Le yenye yezona zinto zinencasa esinokuzifumana. Ngaphezulu kwayo nantoni na kuba inyama iya kufakwa kwezona zilungileyo zemifuno kwaye iya kongeza ngakumbi incasa. Njengakule meko, iindlela ezahlukeneyo zokupheka ziqhelekile. Kodwa siza kuyenza ibe lula kakhulu. Ngale ndlela, wonke umntu unokuzuza kwiresiphi enje. Bhala phantsi!
Izithako zabantu aba-4
Ihagu ishiya ikhilo enye, malunga.
3 iitumato eziphakathi
Iipunipoli ezi-4 zeoli yeoli
Ityuwa, ipepile kunye ne-oregano okanye i-thyme.
Kuqala kwinto zonke, siza kukhathalela ukungcamlisa inyama. Ukwenza oku, siya kongeza ityuwa, kunye ne-oregano kunye nepepile, ngaphandle kokulibala ioyile. Ngoku, kuya kufuneka sisike imifuno. Eyona nto intle kukuba itswele lingena kwimisesane, kunye netumato kwizilayi, ngelixa ipepile ingcono ukuba iyimicu. Nangona wonke umntu enokwenza ukusikwa akuthandayo. Kuya kufuneka sizongele le mifuno ngetyuwa encinci, i-oregano kunye namathontsi ambalwa eoyile.
Ngoku kufuneka nje beka imifuno enyameni kwaye usonge yonke into kwifoyile yealuminium. Siyisa ehovini kangangemizuzu engama-20. Emva kweli xesha, siya kulisusa iphepha kwaye kwakhona siya kulivumela ukuba liqhubeke nokwenza, lingatyhilelwanga, eminye imizuzu eli-12 okanye eli-15. Soloko ulawula i-oveni, kuba ayifani yonke kwaye ezinye zifuna imizuzu engaphantsi. Siya kuyisebenzisa siyisike ibe ngamacwecwe kwaye ungayikhapha kunye neetapile eziqhotsiweyo okanye ezimnandi.
Iphekiweyo yengulube ene-mustard kunye nobusi
Ukuba ufuna ukonwabela incasa eyahlukileyo, kodwa ushiye iindwendwe zakho zimangalisiwe, akukho nto njengokulungiselela iresiphi ye Iphekiweyo yengulube ene-mustard kunye nobusi. Uya kubona ukuba ezi zithako zongeza njani incindi eyongezelelweyo kwinyama kunye nencasa yayo.
Izithako abantu aba-4
1 ikhilogy yengulube esuswayo
Iipuniwe ezimbini ze-mustard
90 ml yobusi
Ityuwa, ipepile kunye ne-oregano
Kuqala, siza kuyinika inyama ukusikwa kancinci. Oku kwenzelwa ukuba xa sidibanisa ezinye izithako zidityaniswe kuyo. Sitshisa i-oven malunga nama-200º. Sibeka iqhekeza lenyama kwitreyi kwaye ngelixa, Silungiselela i-marinade. Imalunga nokuxuba igalikhi ecoliweyo, ioyile, isardard, ubusi esityeni kunye nokongeza ityuwa encinci kunye ne-oregano. Xa yonke into idityaniswe kakuhle, yika inyama kwaye ungeze umxube ngaphezulu.
Gquma kakuhle ngefoyile yealuminiyam kwaye uyibeke eontini. Siza kuyishiya imizuzu engama-45 okanye engama-50, kodwa njengoko sihlala sisitsho, lumka kuba i-oveni nganye yahlukile. Ungaya ukuyojonga kwaye xa sele ilungile, uya kulisusa iphepha kwaye ushiye eminye imizuzu embalwa yokupheka kwayo ukugqiba.
Inyama yengulube ebhakwe eyosiweyo
El ibhaki yenyama yengulube ebhakwe, inokuba yenye yeendlela zokupheka ezinzima, kodwa ke, ayinangxaki. Ukongeza, ihlala ilukhetho olufanelekileyo kwisidlo sakusapho, apho ufuna ukumangaliswa ngesitya esityebileyo kunye nentsusa.
1 kg yehagu esinqeni
Iisilayi ezi-12 ze-Serrano ham
Iilayi ezili-12 zebhekoni
Izilayi ezi-8 zeshizi.
Iglasi lewayini emhlophe
Ithisipuni yethyme kunye nenye ye-oregano.
Mhlawumbi elona candelo linzima, ukuyibiza ngandlela thile isinqe sinqunqiwe. Kuya kufuneka siyinike ukusikwa kathathu. Kufuneka ivuleke ngokupheleleyo, ngokungathi yayingumaleko oxande. Xa sele silungile, silungiselela i-oven kuqala. Ngoku kufuneka siyigcwalise. Ukuqhubeka nenyama, siza kongeza ityuwa encinci kunye nepepile. Ke imitya yebacon, iham kunye netshizi emva koko ziya kugubungela yonke ithenda.
Ngumzuzu ofanelekileyo wokuphinda uyijikeleze kwakhona, unakekele ukuba kungabikho nxalenye yokugcwaliswa kuphumayo. Siyayiqinisa kancinci kwaye ekugqibeleni siyibopha ngentambo eshinyeneyo encinci. Sibeka iqhekeza kwisitya sokubhaka kwaye sibuyele kwityuwa kunye nepepile, songeza iziqholo kunye neoyile. Sishiya isiqingatha seyure malunga nama-200 degrees. Emva kwelo xesha, kuya kufuneka uvule i-oveni kwaye uyigalele kwiwayini. Emva koko, siya kuyishiya kwakhona phantse enye isiqingatha seyure. Kodwa ewe, qiniseka kuba i-oveni nganye iyahluka. Nje ukuba uphume ehovini, kuya kufuneka uyifudumeze kancinci kwaye ususe umsonto.
Kwaye ukuba uyathanda, ungathandabuzi ukuzama ngeorenji:
Ingulube yeorenji ishiya
Ixesha lokulungiselela Imizuzu ye20
Ixesha lokupheka Imizuzu ye40
Ixesha elipheleleyo 1 iyure
Iikhilokholi ngokusebenza 340
Ukupheka kwenyama, Iiresiphi zeKrisimesi, Iiresiphi ezilula
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » Ukupheka kwenyama » Inyama yehagu ebisiweyo
Iiresiphi ezilungileyo kakhulu zityebe kakhulu
Iingcebiso zokuphelisa ii-pie nee-pie